Yini ama-tachyons? Konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ku-physics ne-astronomy, kufundwa izinhlayiya zokucabanga ezikwazi ukuhamba ngokushesha kunejubane lokukhanya. Lezi zinhlayiya zokucabanga zibizwa ama-tachon. Yize umbono ka-Einstein wokuhlobana usitshela ukuthi izinhlayiya azikwazi ukuhamba ngokushesha kunejubane lokukhanya, lezi zinhlobo zezinhlayiya zisetshenziselwa ukwenza izifundo ezahlukahlukene lapho kutholakala khona izinzuzo ezinkulu zesayensi.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngama-tachyons nezici zawo.
1 Yini ama-tachyons
2 Ukulinganiselwa kanye nethiyori yenkambu
3 Ngabe ama-tachyon angaphendula imibuzo mayelana nendawo yonke?
Uma sihlaziya izinhlayiya ezahlukahlukene ezihamba emkhathini nesikhathi ku-physics noma i-gastronomy, sithi kunophahla lwejubane lokukhanya. Noma ngubani ongahamba ngejubane ngokushesha kunokukhanya, uzokwazi ukuhamba ngesikhathi. Kusukela kusethi yamathoni akwazi ukuhamba ngesivinini esikhulu, amandla we-tachyon azalwa. Lolu hlobo lwamandla aluthathi hlangothi futhi ihamba ngejubane eliphindwe ka-27 kunejubane lokukhanya. Ama-Tachyon yizinto zalolu hlobo lwamandla futhi ahambelana namandla okucabanga.
Uma siyihlaziya ngombono wombono ka-Einstein wokuhlobana okukhethekile, i-tachyon yinhlayiyana yokuqagela ene-quadrimoment yohlobo lwesikhala. Lokhu kusho ukuthi amandla nezikhathi zayo zingokoqobo, ubukhulu bayo ekuphumuleni kungaba yinombolo engokomfanekiso. Lokhu kusho ukuthi i-quad yakho izoba inegethivu. Sihlaziya umzuzu wakho wesikhathi bese ubona ukuthi uzohlangabezana ne-tachyon nayo ecatshangwayo.
Umphumela wokufuna ukwazi ukuthi ama-tachyon anakho lokhu, ngokungafani nezinhlayiya zangempela, ijubane lalezi zinhlayiya likhula njengamandla alo okukhula. Umphumela wokuthi lokhu kungenzeka kungenxa yokuhlobana okukhethekile. Ngokuzenzisa simaka uhlobo lwetachyon olunesisindo esiyisikwele esingesihle. Uma sivumelana no-Einstein, ingqikithi yamandla inhlayiya enayo ingukuthi izikhathi zayo zokuphumula ziningi ijubane lokukhanya liphindwe kabili futhi liphindaphindwe ngesici seLorentz.
Lapho ama-tachyon esetshenziselwa into ejwayelekile siyabona ukuthi amandla akhula ngejubane futhi aba ngokungapheli njengoba isivinini sisondela ngejubane lokukhanya. Uma isisindo sicatshangwa sizoba nokuthi inani elincanyana lengxenyana nalo kufanele licatshangelwe ukuze kutholakale inombolo yangempela yamandla. Ukuze i-denominator icabangeke, inombolo yempande eyisikwele kufanele ibe inegethivu. Lokhu kuzokwenzeka kuphela uma ijubane lokuhamba okuthile likhulu kunejubane lokukhanya. Yilapho iqiniso lokuthi itachyon iyinhlayiyana ehamba ngejubane eliphakeme livela lapho kuzodala ukukhanya ukwenza kanjalo.
Ukulinganiselwa kanye nethiyori yenkambu
Kumele kuqashelwe ukuthi ama-tachyon anqunyelwe inani lohlobo lwendawo ye-graphite etholakala ngokuhlaziya amandla nesikhathi. Ngakho-ke, le nhlayiya yokuqagela ayisoze yahamba ngesivinini esiphansi kunaleso sokukhanya. Njengeqiniso elithandekayo, njengoba amandla ale nhlayiya ancipha, ijubane layo liyakhula.
Uma ama-tachy ayekhona futhi engaxhumana nendaba ejwayelekile umgomo wobungozi ungaphulwa. Lesi simiso sichaza ubudlelwano phakathi kwezimbangela nemiphumela. Kuyisimiso esiyisisekelo sazo zonke izayensi yemvelo, ikakhulukazi emkhakheni we-physics. Isimo singabuye sifundwe kweminye imibono efana nefilosofi, ukubala kanye nezibalo.
Ngokomqondo wokuhlobana okujwayelekile, kungenzeka ukwakha izikhathi zesikhala lapho izinhlayiya zingasakazeka khona ngokushesha kunejubane lokukhanya. Lesi yisikhala sesikhathi esihlala sihlobene nombukeli okude.
Uma siya kumcabango wensimu siyabona ukuthi ama-tachyons ngokuvamile ayinsimu ye-scalar. Kulokhu, inesisindo esiphindwe kabili esingesihle. Iqiniso lokuthi okuthile okunjalo likhona kusho ukuthi kukhona ukungazinzile kwesikhala sesikhala sesikhathi. Lokhu kungenxa yokuthi amandla we-vacuum anesilinganiso esiphezulu kunokuncane. Umfutho omncane kulesi sikhala nangesikhathi ungadala ukubola kwama-amplonon exponential akhiqiza ukufinyela kwama-tachyons.
Ama-Tachyons nawo avela ezinhlotsheni eziningi ze-theory theory. Lo mbono uthi konke esikubonayo yizinhlayiya ezihlukaniswe ngama-electron, ama-photon, ama-graviton, njll. Zonke lezi zinhlayiya empeleni ziyizimo ezahlukahlukene zokudlidliza ngentambo efanayo. Ngemuva kwalokho, ubukhulu bokuthile okuthile bungancishiswa njengoba lokho kudlidlizela okwenziwa yintambo. Ama-tachon avela ezinhlakeni eziningi zezindlela ezivumelekile futhi kusho ukuthi ezinye izifundazwe zinenqwaba yezikwele ezingalungile. Ngakho-ke, bayizixuku eziqanjiwe.
Ngabe ama-tachyon angaphendula imibuzo mayelana nendawo yonke?
Ososayensi Imithi ethosiwe, waseBrown University, kanye Yves gabellini, kusuka ku-INLN-Université de Nice, cabanga ukuthi izimfihlakalo ze-Standard Model zingaxazululwa ngama-tachyons. Labo sosayensi baqhamuke nemodeli esekwe kuma-tachon ngenkathi bezama ukuthola incazelo yamandla amnyama esikhaleni. Imodeli abayidalile ibinobunzima obuhlukahlukene bezibalo njengoba bekukhona izinombolo ezingalindelekile neze.
Siyazi ukuthi inqwaba yethachyon iyinombolo engokomfanekiso. Lokhu akunjalo ngezinhlayiya ezijwayelekile. Ososayensi babona ukuthi ngokufaka phakathi ukuguquguquka kwetachyon namabili okulwa netachyon, izinombolo eziqanjiwe ezingasizanga ukuqeda izibalo zingasuswa. Bangachaza nokukhula okusheshayo kwendawo yonke ngezikhathi zokuqala kokudalwa kwayo.
Lokhu kucabanga akunakuphikwa yinoma ikuphi ukuhlolwa kokuhlola. Kodwa-ke, imodeli ihambelana ngokuphelele nayo yonke imininingwane yokuhlola etholakala manje kumandla amnyama namandla we-inflation okwenzeka lapho ukuqhuma okukhulu kwakha indawo yonke.
Zonke lezi zibalo ziphakamisa ukuthi ama-tachyon anamandla amakhulu azokwazi ukuphinda ahlele kabusha cishe wonke ama-photon akhishwayo ngakho-ke, baba ezingabonakali.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ayini ama-tachon.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » AmaTachyons